Iphupha malunga noMonakalo wamanzi ➡ ➡️ Discover Online Online ➡️
Iphupha Ngomonakalo Wamanzi
Nabani na ojongana nomonakalo wamanzi ekhayeni okanye efulethini ufuna imithambo-luvo elungileyo, umonde, umntu osebenza ngemibhobho yamanzi, kwaye ngaphezu kwako konke, i-inshurensi elungileyo yokuhlawulela umonakalo nokulungiswa. Ukuba ngoku kucingelwa ukuba umonakalo wamanzi awufane wenzeke, amanani einshurensi angqina ngenye indlela. Umbhobho ogqabhukileyo okanye umatshini wokuhlamba oneziphene uhlala esenza ukuba indawo yokuhlala ikhukule okanye iindonga zifumane ukufuma. Ukufuma kunokubangela umonakalo omkhulu, nakwilaphu lesakhiwo.
Umnxeba olula nongalindelekanga unokusenza silibale ukuba besiza kuhlamba. Emva koko sinokuhlala ngokukhululeka kwigumbi lokuhlala kwaye sithethe emnxebeni ngelixa itephu isasebenza kwaye igumbi lokuhlambela liguqula libe lidama elincinci.
Umonakalo wamanzi akusoloko kufuneka ube sisiphene sobuchwephesha, inokuba sisiphumo sokungakhathali kwakho. Ulubona njani utoliko lwephupha lomqondiso wephupha "umonakalo wamanzi" kwaye uwutolika njani umfanekiso wephupha kumanqanaba ohlukeneyo ephupha?
1 Uphawu lwephupha «ukonakaliswa kwamanzi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukonakaliswa kwamanzi» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukonakaliswa kwamanzi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukonakaliswa kwamanzi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, ukonakaliswa kwamanzi kubonisa into efumanekayo ngaphandle kolawulo. Amanzi ngamandla endalo, kule meko anokufumana kuphela indlela yawo kuba into emisayo inendawo ebuthathaka.
Ukugqithiselwa kwilizwe lokwenyani, iphupha malunga nomonakalo wamanzi lisondele kakhulu kwisihloko. ukungabi namandla y Ukuphulukana nolawulo. Amanzi achithileyo abonisa uloyiko olucinezelweyo lokuba iphupha lizama ukufihla okanye ukulawula ngokunyanzelwa. Nangona kunjalo, ezi zomelele kangangokuba zilungisa indlela yazo zize ngaloo ndlela zikhuthaze umntu ophuphayo ukuba enze okuthile. Kuya kufuneka ujongane noloyiko, kuba le kuphela kwendlela yokwenza nokusombulula iingcinga ezoyikekayo.
Enye indlela yokutolika umfanekiso wephupha "umonakalo wamanzi" usenokubonisa ukuba umntu ukhe wehlelwa yimeko efanayo okanye wakwazi ukuwuthintela. Ukutolikwa ngokuchanekileyo ngakumbi, umntu kufuneka ajonge ukutolikwa kwephupha lophawu "lwamanzi", kuba oku kuhlala kuvula unxibelelwano ngakumbi phakathi kwemeko yephupha kunye nokuvuka kobomi.
Uphawu lwephupha «ukonakaliswa kwamanzi» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo, umonakalo obangelwe ngamanzi unento yokwenza nolawulo. Unokuba notyekelo olukhulu kubomi bokwenyani ihlaziyiwe yiba kwiimvakalelo zakho. Oku kunokuba luncedo kubomi bemihla ngemihla, kuba ukubonisa iimvakalelo ekugqibeleni kunokukwenza ube sesichengeni kwaye ube sesichengeni.
Nangona kunjalo, uphawu lophupha 'ukonakaliswa kwamanzi' lubonisa ukuba umphanda sele uphuphuma kwaye a Ukukhawuleza kweemvakalelo Isenokuba sisongelo ukuba awufundi ukulawula ngcono iimvakalelo zakho endaweni yokuhlala uzicinezela.
Umonakalo wamanzi ephupheni unokubonisa nakwiphupha ukuba kukho into ebomini bakho egrogrisa ukusilela okanye ukwaphula. Cinga nje ukuba yonke into ebomini bobudlelwane bakho injalo njengoko kufanelekile okanye ukuba imbonakalo entle yangaphandle igcinwe ngelixa undoqo wangaphakathi sele uqhekeka.
Uphawu lwephupha «ukonakaliswa kwamanzi» - ukutolika kokomoya
Ukusuka kwinqanaba lokujonga kwinqanaba lokomoya, umfanekiso wephupha "umonakalo wamanzi" ufuzisela Amandla amakhulu iimvakalelo kwaye ucebisa umntu ophuphayo ukuba aqwalasele ngakumbi isikhokelo sakhe sangaphakathi.